ADY TAO 67 HA : Kolonely iray saika nitifitra olona tao anaty trano fisakafoanana
Mitohy ny afera maloto ataon’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Asa vaventy sasany. 14 juin 2017
Herinandro vitsivitsy lasa izay, araka ny loharanom-baovao voaray tamin’ny olona akaiky ny Fitondrana, dia saika notifirin’ny manamboninahitra miaramila manana galona Kolonely, Talen’ny sampan-draharaha eo anivon’ny minisitera, ny lehilahy iray zanak’Andapa, tao amin’ny trano fisakafonana iray tetsy 67Ha.
Vola tamina raharaha kaontenera efatra izay nitondrana kojakoja sy entana maro, ary navoaka teny amin’ny tranom-panjakana iray teny Alarobia, ka namidy amin’ny mpandraharaha karana no fototry ny olana.
Soa ihany, araka ny loharanom-baovao, fa nisy ny Talen’ny sampandraharaha iray mikirakira vola eo anivon’ny minisiteran’ny Asa vaventy nisakana ilay kolonely mba tsy hitifitra fa raha tsy izany dia loza no niseho. Voalaza fa namidin’ireto tompon’andraikitra ireto ny entana rehetra tao anatin’ireo kaontenera sy ny vy, eny fa na ny kaontenera izay voalaza fa vita amina alominioma.
Araka ny loharanom-baovao voaray hatrany dia fanomezana avy amin’ny firenena Alemana ho an’ny minisiteran’ny Asa vaventy no tao anatin’ireo kaontenera efatra ireo ka notahirizana tao amin’izany toerana izany. Nasain’ilay mpandraharaha karàna nividy izany toerana izany navoaka mantsy ny entana hita tao ka tamin’izany no nahafahan’ireto tompon’andraiki-panjakana ireto nanodinkodina ireto kaontenera efatra ireto. Volabe no azon’izy ireo ka teo amin’ny fizarana izany no nisy fifanolanana.
Manoloana izany fanodinkodinana fananam-panjakana izany tsy vitsy ny mpanara-baovao mety hanotany raha tsy fantatry ny minisitry ny Asa vaventy ny fisian’izany. Fantany tsara araka ny loharanom-baovao fa matoa tsy miteny, ao raha. Tena marina hoy tompon’andraikitra ara-panjakana iray dia nilaza, hono, ingahy minisitry fa tsy mampaninona azy ny mety hanalaza azy amin’ny toerany satria efa manana fiara vaventy « semi-remorques » maromaro sy « quincaillerie ». « Ary azo inoana fa tsy hipetraka eto Madagasikara fa ho any andafy ingahy minisitra raha toa ka mihongana izao Fitondrana izao », hoy hatrany ity tompon’andraikitra ara-panjakana ity.
Na izany na tsy izany tokony hanadihady mikasika ny fanodinkodinana fananam-panjakana izany ny Fanjakana mahefa. Fananam-bahoaka io ka tsy azo atao ny mangina.
Afa-tsy hoe tsy misy Fanjakana intsony eto amintsika ka samy manao izay danin’ny kibony ny mpitondra sy ny mpiasam-panjakana sasany.